TTSweet: ပျဉ်းမနားသွား တောလား ...
Posted by T T Sweet at 2:23 AM
စူးနှယျလေး February 21, 2011 at 5:10 AM
ရှေးခေတ်က အဲလိုပြူတင်းပေါက်နှစ်ထပ်နဲ့အိမ်မျိုး သဘောကျတယ်။
Sonata Cantata February 21, 2011 at 7:09 AM
ကျောင်း၅ကျောင်းကနေ ဘုန်းကြီး ၅ပါး စုံအောင် ပင့်ရတဲ့ ဓလေ့
တိုးဂိတ်တွေမှာဗိုလ်လိုရေးထားတဲ့ Please "Q" ဆိုတာမြင်ရတာစိတ်ပိန်တယ်..
ဒက္ခိဏနဂရကျောက် February 21, 2011 at 2:27 PM
နွေဆိုရင် အောက်ကတံခါးဖွင့်အိပ်ကြတာလေ... air con မှမရှိတော့ အဲလိုလေး..တံခါးဖွင့်အိပ်မှ..
mgchaint February 21, 2011 at 3:01 PM
The house itself is about 65years old. The color of the windows are oil strain color (Yay Nan Gyi). Buddha Prayer are made by my uncle (who is passed away) with teak wood last 30years ago. Sculpture are designed with paper and he sculptured piece by piece.
Anonymous February 21, 2011 at 6:23 PM
ဆွိရေ ပျော်ရာကြီးနော်၊ နောက်တခေါက်တော့ ရောက်အောင် သွားဦးမယ် အဲဒီ နေပြည်တော်ကို...
ဆံရေသောက်ကလေးတွေနဲ့ ကြီးတော်ကြီးတွေရဲ့ ဆံပင်နောက်ပြောင်သိမ်းစတိုင်ကို သီတာ့လိုပဲ သဘောကျ...
Thu February 22, 2011 at 1:18 AM
The areas around the Pyinmana city were dense forest cover when I've been last 20 years ago. So, U Chaint's home was built and decorated as elegant Myanmar design by teak. A memorable was plenty of Myanmar foods by means of enriched in sticky rice, banana and coconuts.
Shinlay February 22, 2011 at 1:47 AM
ကားလမ်းကြီး အကြောင်း ဒီက တီဗီမှာ ပြသွားလို့ ကြည့်ဖြစ် လိုက်ပါသေးတယ်။
Anonymous February 23, 2011 at 1:59 PM
ကန်ဇွန်းရွက်ကော်ပြန့်သုပ် ကိုအလွန်သတိရသွားပါသည်။ပျဉ်းမနားကို ပြန်ရကျိုးနပ်လိုက်တာ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 23, 2011 at 7:35 PM
ညီမလဲ နေပြည်တော် ရောက်ခဲ့တယ် ပျဉ်းမနားမြို့ထဲလဲ ၀င်ဖြစ်တယ်
နေပြည်တော်နဲ့ ပျဉ်းမနားက ကွာခြားချက်တော့ တော်တော်များသွားပြီနော်
ဦးခြိမ့်တို့အိမ်ရဲ့ ထမင်းဝိုင်းနဲ့ ဘုရားစင်ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ
shwezinu February 24, 2011 at 1:58 AM
ဟင်းပွဲလေးတွေ သေချာကြည့်သွားတယ် ဘုန်းကြီး ကြီး ဘုန်းပေးပြီးရင်တော့ တွယ်ချင်စရာ
PAUK February 24, 2011 at 2:12 AM
ရင်ဖုံးအင်ကျီနဲ့ ချိတ်ထမီတ်ထားတဲ့ ကြီးတော်ကိုမြင်ရတာ
လသာည February 26, 2011 at 1:23 PM
လမ်းတွေဖြောင့်ပြီး အိမ်သာတွေသန့်တယ်ဆိုလို့ စိတ်နည်းနည်းသက်သာသွားပါတယ်..ခင်ညားး))) (မဆွိကို လိုက်တုတာလေ)
ပျဉ်းမနားက နာမည်တွေမှတ်ဖို့ ပါလိစာ( လကြီးဧက္ခရာ ရှာမတွေ့လို့) ပြန်ရှာဖတ်ရဦးမယ်.ထင်ပါတယ် မ ရယ်. (^^)/
(၀ဲပြဿနာနဲ့ လင့်ခ်တွေ ပျောက်နေတော့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြတ်သွားတယ်း(..။ အခုမှ စုဖတ်ရတယ်)
လသာည February 26, 2011 at 1:26 PM
အပေါ်ကကွန်မန့်မှ အမှားပြင်ဆင်ချက် (အမှားများနဲ့ ကျွန်တော်း))
ပျဉ်းမနားက နာမည်တွေမှတ်ဖို့ = နေပြည်တော်က နာမည်တွေ မှတ်ဖို့
ပါလိစာ( လကြီးဧက္ခရာ ရှာမတွေ့လို့) = ပါလိစာ (လကြီးအက္ခရာ ရှာမတွေ့လို့ )
နောက်ထပ်များ ကျန်သေးလားး..)
ကျန်ရင်တော့ ဖြည့်ဖတ်ပေးနော်း)))
PhyoPhyo September 14, 2011 at 6:26 PM
မဆွီတီ၊ အခုမှ ဦးခြိမ့်ပုံကို မြင်ဖူးလို့၊ သေသေချာချာကြီးကို မြင်ဖူးသလိုပဲ။
ဦးခြိမ့်က နာမည်ရင်းလား အစ်ကို့သူငယ်ချင်းလားလို့။ ညီမလည်း ပျဉ်းမနားဇာတိမလို့။ နာမည်တော့ရောနေပြီ။ အစ်ကို့သူငယ်ချင်းနဲ့ တော်တော်တူတယ်။ ဟုတ်များ ဟုတ်လားပဲ။
Ju ju is very cute. In the picture, The lady wearing make up colour dress, she is very graceful. I think she might be elder sister of U Chaint according to the post :) .. thank u for sharing the picture. When the time I traveled on that highway, it was nothing in surrounding except field....
Unknown February 29, 2012 at 8:50 PM
T T Sweet March 7, 2012 at 12:16 AM
ဦးခြိ်မ့် အစ်မအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ တော်တော်ချောခဲ့တာပေါ့။ အင်မတန် စိတ်ထား နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ အစ်မကြီးပါ။